ईङ्गल्याण्ड ठुलो लक्ष्य तर्फ अग्रसर बन्दै : २ सय ! रन पनि पुरा – onlinekhelkhabar.com
ईङ्गल्याण्ड ठुलो लक्ष्य तर्फ अग्रसर बन्दै : २ सय ! रन पनि पुरा
अनलाइन खेल खबर संवाददाता	Posted on ३ असार,२०७६
असार ३ , अनलाईन खेलखबर ।। ईङ्गल्याण्ड र वेल्समा जारी १२ औँ सस्करणको आइसीसी एकदिवसीय विश्वकपमा बलियो टिम ईङ्गल्याण्डले विश्वकपमा निरिह बन्दै आएको कमजोर टिम अफगानिस्तानको सामना गरिरहेको छ ।
अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टरमा जारी खेलमा ईङ्गल्याण्डले टस जितेर अहिले सुरुमा ब्याटिंङ्ग गरिरहेको छ । जारी खेलमा यो समाचार तयार गर्दै गर्दा सम्ममा ईङ्गल्याण्डले राम्रो सुरुवात गर्ने क्रममा ३५.१ ओवरमा मात्र २ विकेट गुमाएर २ सय रन पुरा गरिसकेको छ ।
अहिले मैदानमा जो रूटले ५३ र टिमका कप्तान इयोन मॉर्गनले २८ रन बनाएर खेलिरहेका छन । यसअघि टिमले पहिलो विकेटका रुपमा जेम्स विंसलाई ४४ रनमा गुमाएको थियो । पहिलो विकेटको पतन पछि भने दोस्रो विकेटका लागि भने जोनी बेयरस्टो र जो रुट बिच १२० रनको साझेदारी हुन् पुगेपछि टिम अहिले ठुलो लक्ष्य तर्फ अग्रसर भएको छ ।
दोस्रो विकेटका रुपमा पभेलियन फर्किएका बेयरस्टो सतक बनाउन भने चुके । गुलबदीन नईवको बलमा आउट हुन् पुगेका उनले ९९ बलको सामना गर्दै ८ चौका र ३ छक्काको मद्दतमा ९० रनको योगदान गरे ।
हाल सम्म ४ खेल खेलिसकेको अफगानिस्तानले अहिले सम्म राम्रो प्रदशन गर्न सकेको छैन । जसको परिणाम १० टिमको सहभागिता रहेको विश्वकपमा अन्तिम स्थानमा आफुलाई उभाईरहेको छ ।अफगानिस्तान अष्टेलिया सँग ७ विकेट , श्रीलका सँग ३४ रन , न्युजिल्यान्ड सँग ७ विकेट र दक्षिण अफ्रिका सँग ९ विकेटले पराजित भईसकेको छ ।
यसको ठिक बिपरित ईङ्गल्याण्डले खेल संगै मन जित्दै गएको छ । क्रमश खेलमा सुधार देखिदै छ , खेललाई सकात्मक तरिकाले अगाडी बडाएको देख्दा आफैमा लोभलाग्दो देखिन्छ । जसको फल ईङ्गल्याण्डले प्राप्त गर्दै पनि छ । हाल सम्म ४ खेलनै खेलेको ईङ्गल्याण्डले ३ मा जित र १ मा हार व्यहोर्दै ६ अंकशैता अंकतालिकामा अहिले चौथो स्थानमा रहेको छ ।
ईङ्गल्याण्डले आफ्नो पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई १०४ रनको ठुलो अन्तरले पराजित गर्दै विश्वकपमा शानदार सुरुवात गर्दा दोस्रो खेलमा भने पाकिस्तान सँग निराश हुन् पुगेको थियो । जुन खेल पाकिस्तानले १४ रनले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । यसपछि राम्रो कम ब्याक गर्दै ईङ्गल्याण्डले लगातार दुई खेलमा राम्रो प्रदशन गर्दै बंगालदेश लाई १०६ रन र वेस्ट ईण्डिजलाई ८ विकेटले पराजित् गरेको थियो ।
Previous Postटि -ट्वान्टी विश्वकप छनोटको तयारी ५ गतेवाट सुरु हुदैँ : बन्द प्रशिक्षणमा २५ खेलाडीको सहभागिता रहने
Next Postकप्तान मोर्गनको विश्वकपमा पहिलो सतक